Marmaray Expedition Nguva uye Marmaray Mepu - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulMarmaray Expedition Nguva uye Marmaray Mepu
04 / 08 / 2019 34 Istanbul, THE WORLD, Railway, GENERAL, Light Rail System (HRS), musoro wenyaya, TURKEY, VIDEO
marmaray map uye marmaray schedules
Marmaray Expedition Times: Kuvakwa kweMarmaray chirongwa, icho chinobatanidza zvitima kumativi ese eBosphorus, chiri kuenderera nekukurumidza. Railway mitsara ichabatana kune mumwe nemumwe nechitima njanji yekubatanidza pasi peBosphorus. Marmaray Expeditions neMarmaray Fees ine ruzivo rwakadzama nezvewe. MuMarmaray Tenga tikiti chikamu, unogona kuwana zvazvino matikiti matikiti.
Mutsara uchaenda pasi pasi muKazlıçeşme; zvivako zvitsva zvepasi pepasi, Yenikapı neSirkeci, zvichapfuura pasi peBosphorus, uye zvichabatanidzwa kune imwe nzvimbo zvitsva pasi pevhu, Üsküdar, uye ichazuka muSöğütlüçeşme.
Basa reMarmaray rinofungidzirwa kuti rinoparadza bhutiro reIstanbul rakabatikana reBhuphorus. Vanhu vachada kuyambuka Bhophorus nemoto yavo pakarepo.
Mubvunzo wakakura mupfungwa dzevatasvi vanoda kuyambuka Bhophorus naMarmaray ndezvipi nguva iyo mararay line inoshanda?
Mhinduro yemubvunzo uyu inotarisirwa kuziviswa nguva pfupi pasati yatanga chirongwa cheMarmaray. Marmaray chirongwa 29 inotarisirwa kuvhura munaGumiguru 2013. Paunopa chero tsanangudzo pamusoro peMarmaray nguva yekubhururuka, maawa ekushanda, uye nguva yekufambisa, isu tinokupa iwe Marmaray nguva dzekutiza pane yedu webhusaiti:
Marmaray naGebze uye Halkalı ichava kubva ku105 maminitsi.
Pachave nemaminitsi 37 pakati peMarmaray naBojosci naBakirkoy.
Pakati peMarmaray neSöğütlüçeşme uye Yenikapı ichava maminitsi 12.
Pakati pe Marmaray na Üsküdar na Sirkeci vachave maminitsi 4.
Marmaray anomira achashandiswa nenzira imwe chete kubva Gebze kusvika kuSöğütlü tsime. Reneweded rails rairi uye inodzika uye vhututi tsime nevanhu vanoshandisa Marmaray Sogutlucesme kubva kuUkukudar, zvino kubva kuEurope ichapfuura.
Halkalı - Gebze Line Marmaray Zviteshi
Iine nzvimbo yakakura kudarika metro mumigwagwa yeIstanbul Halkalı -Kana pane akazara 42 akamira pane iyo Gebze metro mutsara. Kune idzi dzakamira, 14 iri parutivi rweEurope, neinosara 28 iri parutivi rweAnatolian. Nzvimbo dzeMarmaray dzakadai seiyi:
Interactive Istanbul Metro Mepu
Mepu yeMarmaray RayHaber Tube
Istanbul Railway Systems Mepu (pdf)
marmaray tenga tikiti
Mari shoma pamakosi aya ichave inobvumika kubva ku13.03.2019
Yakazara Tiketi Mutengo: 2,60 TL
Discounted Tiketi Mutengo: 1,25 TL / 1,85 TL
Yakazara Yekubhadhara Mutero
Yakazara Tiketi Mutengo: 5,70 TL
Discounted Tiketi Mutengo: 2,75 TL / 4,0 TL
Eskisehir Ankara High Speed ​​Train Ticket Schedules uye Schedule
Konya Istanbul High Speed ​​Train Ticket Schedules uye Schedule
Ankara Eskişehir Yekumhanya Yekumhanya Tiketi Mitengo
Torbalıya nguva yakawedzerwa
Rwendo rukuru rwupi pakati pezviteshi zvemasitadhi eKadıköy Kartal?
High Speed ​​Speed ​​Train Stations
Izmir Istanbul Highway Mugwagwa